Nizeria: Mampitsahatra Ny Habetsan’ny Fifankahalàna Ara-poko — Ao anatiny sy Ivelan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2016 19:02 GMT
Vola taratasy 50 naira nizeriana mitondra sarin'ny olona avy amin'ny foko Hausa, Igbo ary Yourba. Ahitana foko maherin'ny 250 sy fiteny 500 ny firenena. SARY: Shardayy (CC BY 2.0) (CC BY 2.0)
Endrika raiki-tampisaka ao amin'ny kolontsaina demokratika rehetra ny zon'ny olompirenena hiteny, haneho hevitra, ary hanara-maso ny fitantanana. Saingy hatry ela no efa nitarina tamin'ny dokambarotra sy toerana mivaingana hafa ireo sehatra ho an'ny fifampiresahana, mba hampidirana sehatra nomerika ho an'ny daholobe voizina ao amin'ny Aterineto. Ny fireneko, Nizeria, no firenena Afrikana tena mavitrika indrindra amin'ny resadresaka ara-politika ao amin'ny Twitter, arahan'i Afrika Atsimo, Etiopia, Borondi ary Ejipta. Na izany aza, rakotry ny fankahalana sy ny teny ratsy ilay tontolo nomerika mavitrika ananantsika.
Miresaka foko sy fivavahana ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fandraisana fitenenana feno fankahalàna ao Nizeria. Miaraka amin'ireo vondrom-poko maherin'ny 250 isa ary fiteny 500 isa, manana tantaranà fifandirana efa nanomboka tamin'ny taona 1914 farafahakeliny ny firenena, rehefa nanjohy ireo faritry ny mpanjanaka tany Atsimo sy Avaratr'i Nizeria i Grande Bretagne mba hamorona Fanjakana tokana. Nanohy nanakorontana ny firenena hatrany ny fifandirana ara-poko sy fivavahana taorian'ny fahaleovantena ny taona 1960, na dia nitazona ny toe-draharaha tsy hipoaka aza ireo lalàna henjana nanafoanana ny fahafahana miteny malalaka sy ny fikambanana nandritra ireo am-polo taonany maro nisian'ny jadona ara-miaramila.
Fa filaminan'ny fasana ihany io. Vao mainka nanaratsy ny fifampizarazaran'ny foko ny fidikidiran'ny miaramila tamin'ny fitondràna nandritra ny 28 taona, ny tena marina, tamin'ny fitondràna ny fifandrafesan'ny foko ho eo amin'ny toerana voalohany amin'ny fiainam-pirenena. Nojerena tamin'ny fomba fijery hoe isika mifampitaha amin’izy ireo ny zavatra rehetra.
“Vao maika nanaratsy ny fifampizarazaran'ny foko ny fidikidiran'ny miaramila tamin'ny fitondràna nandritra ny 28 taona, ny tena marina, tamin'ny fitondràna ny fifandrafesan'ny foko ho eo amin'ny toerana voalohany amin'ny fiainam-pirenena. Nojerena tamin'ny fomba fijery hoe isika mifampitaha amin’izy ireo ny zavatra rehetra.”
Feno fanantenana tokoa noho izany ireo Nizeriana tamin'ny fiverenan'ny demokrasia ny taona 1999. Hita ho nofoanan'ny fifidianana ny Filoha Olusegun Obasanjo, ireo disadisa teo amin'ny foko izay nampiavaka ny politikan'ny firenena—niaraka tamin'ny fanafoanan‘ny Jeneraly Ibrahim Babangida ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 12 Jona 1993, ary ny fanandraman'itompokolahy Jeneraly Sani Abacha handimby ny tenany teo amin'ny fitondràna. Hita ho toy ny fahatanterahan'ny andalana sasany amin'ilay hiram-pirenena teo aloha ny toe-po niainan'ny firenena tamin'izay fotoana izay: “Na mety ho samihafa aza ny foko sy ny fiteny/Mitsangana ao anatin'ny firahalahiana izahay”.
Indrisy, fotoana fohy ihany no niainana io fanantenana io. Nitsangan-ko velona indray ny avelon'ny fifandrafesana eo amin'ny foko, niaraka tamin'ny fananganana ilay Kaomisionan'ny Fanitsakitsahana ny Zon'olombelona (Oputa Panel), izay nitadiavan'ireo vondrom-poko samihafa ny rariny noho ireo heloka bevava natao tamin'izy ireo. Nampiseho ireo tantaranà vono olona mahatsiravina avy tamin'ireo fanangonan-tsonia maro, fa tsy mbola sitrana akory ireo ratra fahiny sy ireo fitarainana nokoboniny.
Tsy manana fototra ijoroana ny foto-pisainan'ireo antoko politika any Nizeria. Ny haka fahefana sy ny hangorona ny fananam-bahoaka ihany no hany zavatra mampiray saina azy ireo. Noho izany, manohy manjakazaka amin'ny politikan'ny antoko ireo sivily izay nanampy ny miaramila, ireo miaramila misotro ronono, ary ireo namany. Io no vao mainka mahasarotra ny olana eo amin'ny fifandirana ara-poko, satria manana tombotsoa amin'ny fitazonana ny toe-draharaha tsy hiroso ireo mitazona ny fahefàna.
Ho an'ny media sosialy sy ny fiantraikany amin'ny politika Nizeriana, ireo fifidianana filoham-pirenena ny taona 2015 no teboka nanamarika ny fivadihan'ny rasa. Milaza tena ho mpanelanelana ny safidy ho an'ireo antoko politika mitady ny handersy lahatra ny hevi-bahoaka sy hitady ireo vatony ny media nomerika. Raha toa ka mety mbola tsy singa voalohany amin'ny famaritana ny valim-pifidianana na hanosehana ireo fampielezan-kevitra ny media sosialy, efa maherin'ny antsasaky ny mponin'i Nizeria kosa—46.1% amin'ireo mponina miisa 170 tapitrisa—ankehitriny no manana fahafahana miditra Aterineto, ary ho an'ny vondrona manana salan-taona eo anelanelan'ny 18-35 taona, mitàna anjara toerana lehibe eo amin'ny fanosehana ireo safidy ara-politika ny media sosialy.
“Namadika ny media sosialy ho lasa fitaovana mahomby fanamafisana resaka feno fankahalàna anefa ny fahefàn'ireo Nizeriana “mpitondra faratampony” ao amin'ny Aterineto, izay afaka manosika ireo hevitra sy fihetsik'ireo mpanaraka maro mikasika ireo olana malaza…”
Toy ny fitaovan-tserasera rehetra, ny aterineto dia mety ho mpamatsy ny tsara sy ny ratsy. Naseho ho toy ny “efitrano manako” ihany koa io, toerana iray hifandraisan'ny tsirairay sy hiarahana amin'ireo olona mitovy amin'izy ireo, indrindra indrindra. Nampivadika ny media sosialy ho lasa fitaovana mahomby fanamafisana fitenenana feno fankahalàna anefa ny fahefàn'ireo Nizeriana “mpitondra faratampony” ao amin'ny Aterineto, izay afaka manosika ireo hevitra sy fihetsik'ireo mpanaraka maro mikasika ireo olana malaza, ary vao mainka mandetika izany ny fahafahan'ireo mpampiasa tsy hilaza ny anarany.
Nandritra ny fotoanan'ny fampielezankevitry ho an'ny fifidianana ny taona 2015, niroborobo tao amin'ireo tambajotra sosialy ny fifantohana amin'ny resaka foko. Nanao fanadihadiana votoaty niisa 250 nisy tenifototra hoe #Igbo, izay milaza ireo vahoaka Igbo any Nizeria Atsimo, iray amin'ireo vondrom-poko lehibe telo ao amin'ny firenena, ny fikarohana fanadihadiana iray izay nandraisako anjara. [Famborahana feno: Igbo aho]. Tena nampiahiahy ireo zavatra hita. Hitanay ireo bitsika manambany, manadrohadro, miampanga vondrom-poko iray tamin'ny tsy nifidianany ny Filoha Muhammadu Buhari. Nohamafisin'ny vokatra ofisialy navokan'ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana ihany koa ireo valin'ny fanadihadiana, valim-pifidianana nampiseho fa nisy nidiran'ny resaka foko koa ny fifidianana ny taona 2015.
Tsy i Nizeria ihany akory no hany firenena eto an-tany ahitàna ny fitomboan'ny resaka fizarazaràna ara-poko. Etazonia izao miatrika ny fifidianana filoham-pirenena ianteheran'ny zavatra rehetra, lehibe indrindra eo amin'ny tantaran'ny firenena, izay nanovàn’ny iray amin'ireo kandidà ireo ny fankahalàna ho fitaovana enti-miady hakàna vatom-pifidianana. Nolazaina ho natosiky ny lonilonin'ireo Britanika sasany nateraky ny resaka fifindràmonina ilay fitsapankevi-bahoakan'i Royaumes-Uni #Brexit. Ary eto amin'ny tanibe Afrikana, natao fitaovana tamin'ireo fifandonana mahery vaika niseho taorian'ireo fifidianana tany Kenya ny taona 2007 ny fankahalàna eo amin'ny resa-poko, ary naely be tamin'ny alalan'ny teknolojia nomerika.
“…ny fiarovana ny zo ho afaka miteny malalaka….vao mainka manan-danja bebe kokoa raha jerena ny zava-mitranga hoe efa voatohintohin'ny fitsabahan'ny governemanta ny habaky ny Aterineto eto amin'ny tanibe Afrikana.”
Ny tena fototry ny demokrasia mamela ny rehetra handray anjara anefa, midika fa tsy azo iadiana hevitra ny fiarovana ny zo ho afaka miteny malalaka. Vao mainka io lasa manan-danja bebe kokoa raha jerena ny zava-mitranga hoe efa voatohintohin'ny fitsabahan'ny governemanta sahady ny habaky ny Aterineto eto amin'ny tanibe Afrikana.
Ny fitazonana biloagera iray mpomba ny governemanta aty Nizeria; ny herisetra atao amin'ny media nomerika any Etiopia; ny fanagadrana ireo mpanohitra any Gambia; ny fibahanana an-terisetra tanteraka ny media sosialy nandritra ireo fifidianana vao haingana tany Oganda; ny hetsika nataon'ireo governemantan'i Oganda sy Nizeria mba hametrahana fanarahamaso henjana amin'ireo media sosialy: ireny rehetra ireny dia samy maneho ny haben'ny hoe tonga hatraiza ny ataon'ireo fanjakana mba hanafoanana ny fahalalahana miteny amin'ny sehatrety anaty habaky ny Aterineto.
Tsy afaka ny hanao sorona ny tenantsika isika na hanolotra ireo zontsika ho eny an-tànan'ireo voromahery izay mitady ny zavatra rehetra mba hamongorana ny fahalalahana miteny, na amin'ny Aterineto na ivelany. Fa mila mitandrina ihany koa ireo Nizeriana amin'ny fijirihana ireo resadresaky ny daholobe izay ataon'ireo hery mikaroka hatrany ny fisaraham-bazana.
Ny fampiharana ny tatitry ny Kaonferansy Nasionaly 2014 (#NGConfab) izao no vahaolana azo ampiharina. Na hoe tsy tonga lafatra aza io, ny iray amin'ireo sosokevitry ny #NGConfab dia ny fanodinana ny biraon'ny Filoha hifandimbiasan'ny Avaratra sy Atsimo any amin'ireo faritany politika enina eo amin'ny firenena (Avaratra Atsinanana, Avaratra Andrefana, Avaratra Afovoany, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana ary Atsimo-Atsimo). Mety hahalasa lavitra amin'ny ady amin'ny onjan'ny fifankahalàna ara-poko, amin'ny resaka ara-politika – na anatiny na ivelan'ny Aterineto – ao Nizeria, ny fandaminana toy izany.